Layliyo iyo Tababar - Vondt.net - Bogga 3 ee 34
4 Layli ka dhan ah Plattfot (Pes planus)
12 / 07 / 2016 /2 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Miyaad ku dhibtoonsan tahay falaaraha fidsan iyo muruqyada lugta tabarta daran? Halkan waxaa ah 4 jimicsi oo wanaagsan oo xoojin kara fududahaaga, muruqyada cagta oo kaa caawin kara cagaha fidsan. Waxaad ka akhriyi kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan cagaha fidsan, oo sidoo kale loo yaqaan shuruudaha caafimaadka sida pes planus iyada - in si fiican loo fahmo xaaladda.
Hoos ugu rogo si aad u daawato laba fiidiyow oo tababar weyn ah kaas oo kaa caawin kara xoojinta dhinacyadaaga iyo cagahaaga oo shaqaynaya.
VIDEO: 6 Layli Oo Ka dhan Ah Plantar Fascitt iyo Cagta Xanuunka
Kuwa leh geesaha fidsan iyo cagaha fidsan waxay badanaa u nugul yihiin inay ku beeraan fascitis - taas oo ah dhaawac jilibka ah oo ku yaal saxanka murqaha hoose ee cagtaada hoosteeda. Lixdaan jimicsi waxay kaa caawinayaan xoojinta xididdadaada, waxay kordhinayaan wareegga dhiigga ee deegaanka waxayna dabcinayaan murqaha muruqyada cagaha kaliya.
MUUQAAL: 10 Jimicsi Oo Xoog Xoog Ah Oo Xijaabka Iyo Fududaynta
Dad badan ayaa yaabban markaan kahadalno xiriirka ka dhexeeya xoojinta sinta sinta iyo cagaha fidsan. Tani waa sababta oo ah miskaha iyo ciribta cagaha ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu waa weyn marka ay timaado yareynta culeyska naxdinta leh markaad dhulka timaado. Meelaha lugta leh ee fidsan, dalabyo badan ayaa lagaa saarayaa miskahaaga - taas oo markaa u baahan inaad ahaato mid aad u xoogan si aad ugu adkeysato culeyska.
Tobankan jimicsi ee xoogga ah ayaa kaa caawin kara inaad xoog ku yeelato miskaha adiga oo ka yareynaya kilkishaada.
Waqti dheeri, iyada oo aan jimicsi habboon la samayn, iyo rarka cagaha ee taagan, muruqyada yar ee lugta ayaa daciifa. Maaddaama oo aynaan mar dambe u boodaynin sidii carruurteenna oo kale, cagaheennii waxay lumiyeen awoodda qaraxyada ee ay lahaan jireen. Sidaa darteed, qodobkaan waxaan diirada ku saarnay layliyo xoojinaya cirifka cagaha isla markaana yareyn kara xanuunada iyo astaamaha cagaha fidsan.
1. "Suulka oo ku jajaban shukumaan"
Layli aad ufiican oo xoojinaya garabka lugta iyo muruqyada cagaha wax ku ool ah.
Ku fadhiiso kursi oo tuwaal yar dhulka dhig hortiisa
Dhig kubadaha hore ee kubada cagta korkeeda bilowga tuwaalka kuugu dhow
Farahaaga kala bixi gacmahaaga oo timaha ku qabo adiga oo dhinacaaga u soo jiid - sidaa darteedna cagtaada hoosteeda
Ku hay shukumaan 1 ilbiriqsi kahor intaadan sii deyn
Siidaa oo ku celi - illaa intaad ka gaadhayso dhinaca kale ee shukumaanku
Bedel ahaan waad sameyn kartaa 10 ku celcelin ah oo ka badan 3 set - doorbida maalin kasta si ugu wanaagsan.
2. Suul kor u qaadista iyo cidhibta
Kor u qaadista suulka iyo walaalkiis ka yar ee loo yaqaan, kor u qaadista ciribta, waa labadaba layliyo muhiim ugu ah murqaha iyo cagaha. Jimicsiyada waxaa lagu sameyn karaa dhulka banaan ama jaranjarada.
Booska A: Ku bilow cagahaaga meel dhexdhexaad ah oo kor u qaad cagahaaga - adoo usii riixaya dhinaca kubada cagta.
Booska B: Meel la bilaabo Kadib cagahaaga kor ugu qaad ciribtaada - halkan waxaa laga yaabaa inay ku habbooneyd inaad derbi ku tiiriso.
- Samee 10 ku celcelin labada layli ee kor ku xusan 3 xabo.
3. Kala-bixin timaha Ciriiriga iyo muruqyada lugaha
Sida laga soo xigtay daraasadaha, ciriiriga ciriiri yar ee achilles ayaa sababi kara inay sabab u noqdaan fallaarrada guryaha fidsan. Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad kala bixisid dhabarka weysha iyo Achilles maalin kasta - halkaasoo aad ku dhejisid fidinta 30-60 ilbiriqsi oo aad ku celcelisid 3 nooc Sawirka hoose waa hab fiican oo loo kala bixiyo dhabarka lugta.
4. Jimicsiyada Cagta Ballet
Qoob-ka-ciyaarayaasha ballet waxay ku tiirsan yihiin si aan caadi aheyn oo shaqeynaya iyo muruqyo lugo xoog leh. Sidaa daraadeed, waxaa jira diirad sareysa ka mid ah xirfadyaqaannadan sidii loo xoojin lahaa lugta lugta iyo looxyada.
Fariiso oo lugahaagu ku kala fidin hortaada
Dusha canqowga u sii qabo oo hay saddex illaa shan ilbidhiqsiyo
Ku noqo meeshii laga bilaabay
Markaa isku day inaad kaliya ciribiso suulashaada oo aad booska hay saddex illaa shan ilbidhiqsiyo
- Ku celi jimicsiga 10 jeer.
Cagta lugta ah waxay sababi weydaa lugta lugta
Si loo magdhabo culeyskan khaladka ah, waxaan sidoo kale si xoogan kugula talineynaa inaad isticmaasho sharaabaadyo isku dhafan si aad u bixiso soo kabasho dhaqso ah:
XIDHIID LA XIRIIR / SELF-CAAWIMAAD: - Cadaadiska cadaadiska
Sock this sock waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu cadaadiyo dhibcaha saxda ah ee dhibaatooyinka cagaha. Cufnaanta sharaabaadku waxay gacan ka geysan kartaa kordhinta wareegga dhiigga iyo bogsashada kuwa ay saameeyeen shaqada hoos u dhacday ee cagaha.
PAGE xiga: - Cag xanuun? Waa inaad tan ogaataa!
Sidoo kale aqri: - 4 Jimicsi oo ka dhan ah Plantar Fasciitis
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan farriimaha iyo su'aalaha 24 saac gudahood. Waad doorataa inaad ka rabto jawaabaha dhakhtarka loo yaqaan 'chiropractor', masseur, therapist body, therapist) oo aad ku sii wadato waxbarashada ku daweynta, takhtarka ama kalkaaliyaha caafimaad. Waxaan kaloo kaa caawin karnaa inaad kuu sheegto jimicsi. kaas oo ku habboon dhibaatadaada, kaa caawinaya inaad hesho daaweeyeyaal kugula taliya, turjuma jawaabaha MRI iyo arrimo la mid ah.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Pes-planus.jpg?media=1648573622 379 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-12 15:49:482022-03-18 17:26:314 Layli ka dhan ah Plattfot (Pes planus)
Bogga 3 ee 34<12345>»